ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမအပေါ်လိမ်လည်ခဲ့လို့ ဒေါသထွက်ပြီး….ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမအပေါ်လိမ်လည်ခဲ့လို့ ဒေါသထွက်ပြီး….
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမအပေါ်လိမ်လည်ခဲ့လို့ ဒေါသထွက်ပြီး သူတို့အတူစုဆောင်းထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကိုမျိုချခဲ့တဲ့ ဇနီးသည် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက ၂၈ နှစ်အရွယ် Sandra Milena Almeida အမည်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ခင်ပွန်းသည်က သူမကိုလိမ်ညာနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့သစ္စာမဲ့မှုအပေါ် ...
အသံထက် ၆ ဆမြန်ပြီး ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ SR-72 မောင်းသူမဲ့စပိုင်လေယာဉ်အသံထက် ၆ ဆမြန်ပြီး ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ SR-72 မောင်းသူမဲ့စပိုင်လေယာဉ်
အမေရိကန်လေတပ်အတွက် SR-72 လို့အမည်ရတဲ့ အသံထက် ၆ ဆလောက်မြန်တဲ့ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အသစ်တစ်စီးကို Lockheed Martin ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူ တည်ဆောက်လျက်ရှိပါတယ်။ SR-72 မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကို အဓိကအားဖြင့် ထောက်လှမ်း‌ရေးအတွက် စပိုင်လေယာဉ်အဖြစ် အသုံးချရန် ရည်ရွယ်သော်လည်း တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်အဖြစ်လည်း ...
” စိတ် “ချမ်းသာစေမည့် နည်းလမ်း ( ၁၀ )ချက်” စိတ် “ချမ်းသာစေမည့် နည်းလမ်း ( ၁၀ )ချက်
စိတ် ချမ်း သာ အောင် နေ နည်း ( ၁ ) သူ များ ပြော တိုင်း လိုက် ပြီး မ ခံ စား နဲ့ ။ ...
❝သန်မာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး လဲကျလို့ မရလို့ ရပ်နေရုံပါ ❞❝သန်မာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး လဲကျလို့ မရလို့ ရပ်နေရုံပါ ❞
❝သန်မာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး လဲကျလို့ မရလို့ ရပ်နေရုံပါ ❞ တစ်ခါတလေကျတော့ ပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီး ပစ်လဲလိုက်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်မိတယ် ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုပြီးကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ်မသယ်နိုင်တော့တဲ့ နေရာမှာရပ်နေချင်တဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်မိတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်အနောက်မှာ ကိုယ့်ကို မှီခိုပြီးရပ်နေတဲ့ ...
Battery အိုးတွေပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ သိထားသင့်သော ကိန်းဂဏန်းများ(ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်)Battery အိုးတွေပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ သိထားသင့်သော ကိန်းဂဏန်းများ(ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်)
Battery အိုးတွေပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ သိထားသင့်သော ကိန်းဂဏန်းများ(ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်) အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Battery အိုးတွေပေါ်မှာ CCA ဆိုတဲ့ စာလေးပါလာတာ မိတ်ဆွေတို့သတိထားမိကြ လားမသိ။ အဲဒီ CCA ဆိုတာဘာလဲ တချို့လည်းလာမေးကြပါတယ်။ CCA ဆိုတာဘာလဲ ? CCA ...
“ရေခဲရေ သို့မဟုတ် အဆိပ်သောက်နေကြသူများ”အတွက် ဒီအချက်တွေကို အထူးသတိပြုပါ“ရေခဲရေ သို့မဟုတ် အဆိပ်သောက်နေကြသူများ”အတွက် ဒီအချက်တွေကို အထူးသတိပြုပါ
“ရေခဲရေ သို့မဟုတ် အဆိပ်သောက်နေကြသူများ”အတွက် ဒီအချက်တွေကို အထူးသတိပြုပါ ရေခဲချောင်း ရေခဲထုပ်အစားများသည့် ကလေးများမှာ အပူကန်ခြင်း၊ မျက်နှာနှင့်မျက်ခွံများပေါ်တွင် မိတ်ဖုကြီး များနှင့် အနာဖုများထွက်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ အာသီးရောင်ခြင်းများအပြင် အချို့မှာ ရေခဲမသန့်သဖြင့် ဝမ်းကိုက် ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ခြင်းများဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ရေခဲရေသောက်ခြင်း၏အကျိုးမှာ ...
အင်းလေးကန်ကြီးမှာ ရေတွေ ပျောက်သွားတော့မှာလား….အင်းလေးကန်ကြီးမှာ ရေတွေ ပျောက်သွားတော့မှာလား….
အင်းလေးကန်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကန်ကြီးတွေအနက် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ကန်ကြီး တခုဖြစ်ပါတယ်။ အင်းလေးကန်ကို မှီခိုနေကြတဲ့ လူတွေ အများအပြား ရှိရုံသာမက တိရစ္ဆာန်၊ ပိုးမွှားနဲ့ သစ်ပင်စတဲ့ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ နေထိုင် ရှင်သန်ပေါက်ဖွားရာ နေရာ တခုဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ...